Gam akporo Ndị aghụghọ - Androidsis | Gam akporosis
Na-achọ ụzọ ka mma iji gam akporo ekwentị gị ma ọ bụ ụfọdụ ngwa? Na ụdị nke usoro aghụghọ nke Android ị ga - ahụ ọnụọgụ aghụghọ kachasị ukwuu nke ga - agbanwe ụzọ iji ekwentị gị ma ọ bụ ngwa ndị ị rụnyere na ya. Ekele ha, ị ga-enweta ọtụtụ ihe na ekwentị gị ma ọ bụ ngwa gị.
Usoro dị mfe, maka ụdị ndị ọrụ gam akporo niile, nke ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ ekwentị gị karịa ma ọ bụ nye ya ọrụ ọhụụ ị na-amaghị ruo ugbu a. Njikere ịnụ ụtọ ama gị? Yegyera otu n'ime aghụghọ ndị a.
Ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-ajụ anyị maka aghụghọ ma ọ bụ ndụmọdụ iji mee ka ekwentị na-aga ngwa ngwa. Ọ bụchaghị…
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme Ọnwa 4 .
O nwetụla nke mere anyị niile jiri ekwentị. Arụ ọrụ ọ na-enye mgbe anyị zụrụ ya na ...
Nnukwu G na-enye ihe ọgụgụ isi na ọgụgụ isi na ngwa dịka Google Lens na ọ bụ ...
Mmiri mmiri, ma na foto na vidiyo, bụ ihe dị mkpa maka ndị okike, ebe ...
Enwere ike ịkpọ Retroarch kacha emulator zuru oke anyị ga-enwe egwuregwu nke gara aga nke dị iche iche ...
Taa, anyị ga - egosi gị nnukwu aghụghọ: otu esi etinye Google Assistant na Windows, MacOS na Linux; ọ bụ ezie na ndị a ...
Sharekekọrịta dị nso bụ ọrụ anyị nwere na ngwaọrụ gam akporo anyị kemgbe afọ gara aga, yabụ ugbu a, anyị nwere ike itinye ọnụ ...
Ekele dịrị Apple, ọ dị mfe ugbu a ịfefe foto gị niile ị nwere na iCloud na foto Google. Ihe…
Daysbọchị ndị a gara aga anyị natara mmelite site na ihe nkesa nke na-enye anyị ohere ime ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke ...
Google juru anyị anya ụbọchị ole na ole gara aga site na ihe ọhụụ na-atọ ụtọ nke na-enye anyị ohere ịnwale ogo nke oku vidiyo ...
Usoro kachasị mma maka Huawei P20 Pro